Modely telo ho an'ny dokambarotra indostrian'ny dia: CPA, PPC, ary CPM | Martech Zone
Raha te hahomby amin'ny indostria tena mifaninana toy ny fitsangatsanganana ianao, dia mila misafidy paikadin'ny dokam-barotra mifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasanao sy ny laharam-pahamehanao. Soa ihany fa misy paikady maro momba ny fomba hampiroboroboana ny marika an-tserasera. Nanapa-kevitra ny hampitaha ny malaza indrindra amin'izy ireo izahay ary hanombantombana ny tombony sy ny tsy fahampian'izy ireo.
Raha ny marina, tsy azo atao ny misafidy modely tokana izay tsara indrindra na aiza na aiza ary foana. Ny marika lehibe dia mampiasa modely maromaro, na izy rehetra miaraka amin'ny fotoana iray, arakaraka ny toe-javatra.
Modely Pay-Per-Click (PPC).
Pay-per-click (PPC) ny dokam-barotra dia iray amin'ireo endrika malaza indrindra amin'ny dokam-barotra. Tena tsotra izy io: mividy doka ho takalon'ny kitika ny orinasa. Mba hividianana ireo doka ireo, matetika ny orinasa dia mampiasa sehatra toy ny Google Ads sy doka momba ny teny manodidina.
PPC dia malaza amin'ny marika satria tsotra sy mora ny mitantana. Miankina amin'ny zavatra ilainao, azonao atao ny mamaritra ny toerana misy ny mpihaino anao, manampy izay toetra ilainao. Ambonin'izany, tsy voafetra ny habetsahan'ny fifamoivoizana (ny teti-bolanao ihany no fetra).
Ny fanao mahazatra ao amin'ny PPC dia ny tolotra marika, rehefa manolotra ny marika amin'ny antoko fahatelo ny orinasa mba handresena azy ireo sy hisarihana ny mpanjifany. Matetika ny orinasa dia voatery manao izany satria ny mpifaninana dia mividy dokam-barotra mifototra amin'ny fangatahan'ny marika mpifaninana. Ohatra, rehefa mikaroka ny Booking.com amin'ny Google ianao dia ho voalohany amin'ny fizarana maimaim-poana fa ny fanakanana doka miaraka amin'ny Hotels.com sy ny marika hafa no mandeha voalohany. Ny mpihaino dia mandeha any amin'ilay mividy dokambarotra PPC; noho izany, mila mandoa ny Booking.com na dia izy no mpitarika ny fikarohana maimaim-poana. Raha tsy hita ao amin'ny sehatry ny doka ny orinasa tadiavinao, dia mety hamoy mpanjifa izy amin'ny andro antoandro. Niely hatraiza hatraiza àry ny dokam-barotra toy izany.
Na izany aza, ny modely PPC dia manana fatiantoka goavana: tsy azo antoka ny fiovam-po. Azon'ny orinasa atao ny manombantombana ny vokatry ny fampielezan-kevitra mba hahafahan'izy ireo mampiato ireo izay tsy mahomby. Azo atao koa ny mandany mihoatra noho ny vola azony ny orinasa iray. Io no risika lehibe indrindra hodinihina amin'ny fotoana rehetra. Ho fanalefahana, manoro hevitra aho mba hahazoana antoka fa mahatratra ny mpihaino kendrenao ny fampielezan-kevitrao. Miezaha hanana saina misokatra ary mijanona ho mahay mandanjalanja.
Vidiny isaky ny kilaometatra (CPM) Modely
Ny Cost-Per-Mile dia iray amin'ireo modely malaza indrindra ho an'ireo izay te hahazo fandrakofana. Ny orinasa dia mandoa isaky ny fijery na fahatsapana arivo amin'ny dokam-barotra iray. Matetika izy io no ampiasaina amin'ny dokam-barotra mivantana, toy ny rehefa manonona ny marikao amin'ny atiny na any an-kafa ny fivarotana iray.
CPM dia miasa tsara indrindra amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika. Ny orinasa dia afaka mandrefy ny fiantraikany amin'ny fampiasana tondro isan-karazany. Ohatra, mba hampitomboana ny fankasitrahana ny marika, ny orinasa iray dia handinika ny isan'ny olona mikaroka ny marika, ny isan'ny varotra, sns.
CPM dia hita manerana ny rehetra marketing marketing, izay mbola sehatra vaovao ihany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, nisy fitomboan'ny influencers amin'ny indostria.
Ny haben'ny tsenan'ny sehatra marketing influencer manerantany dia mitentina $ 7.68 miliara amin'ny 2020. Antenaina hiitatra amin'ny tahan'ny fitomboana isan-taona (CAGR) 30.3% manomboka amin'ny 2021 ka hatramin'ny 2028.
Na izany aza, manana lesoka ihany koa ny CPM. Ohatra, ny orinasa sasany dia mandà io paikady io amin'ny dingana voalohan'ny orinasany satria sarotra ny mandrefy ny fiantraikan'ireo dokambarotra ireo.
Cost-Per-Action (CPA) Modely
CPA no modely tsara indrindra amin'ny fisintonana fifamoivoizana - ny varotra na ny hetsika hafa ihany no andoavana ny orinasa. Somary sarotra izany, satria tsy azo atao ny manangana orinasa dokam-barotra ao anatin'ny 2 ora, toa an'i PPC, fa ny valiny dia azo antoka kokoa. Raha azonao tsara eo am-piandohana dia azo refesina amin'ny lafiny rehetra ny vokatra. Izany dia hamela anao hahatratra ny mpihaino kendrenao ary hanome anao angona betsaka momba ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao.
Fantatro izay lazaiko: ny tambajotram-barotra mifandraika amin'ny orinasako - Travelpayouts - manome miasa amin'ny modely CPA. Samy liana amin'ny fiaraha-miasa tsara avokoa na ny orinasa fitsangatsanganana na ny bilaogera fitsangatsanganana satria ny orinasa dia tsy mandoa afa-tsy amin'ny hetsika, ary amin'izany fotoana izany dia mahazo fandrakofana sy fahatsapana, ary ireo tompon'ny fifamoivoizana dia tena liana amin'ny dokam-barotra vokatra na serivisy mifandraika amin'ny mpihaino azy, satria mahazo komisiona ambony kokoa izy ireo. raha mividy tapakila na mamandrika hotely, fitsangantsanganana na serivisy fitsangatsanganana hafa ny mpanjifa. Ny marketing marketing amin'ny ankapobeny - ary Travelpayouts indrindra - dia ampiasain'ny orinasa fitsangatsanganana goavana toy ny Booking.com, Getyourguide, TripAdvisor ary orinasa fitsangatsanganana an'arivony hafa.
Na dia toa ny paikadin-doka tsara indrindra aza ny CPA, dia manoro hevitra aho hieritreritra malalaka kokoa. Raha manantena ny handray anjara betsaka amin'ny mpihaino kendrenao ianao, dia tsy io ihany no paikadinao. Rehefa ampidirinao ao amin'ny paikadin'ny orinasanao izany, dia hahatratra mpihaino betsaka kokoa amin'ny ankapobeny ianao satria hanambatra ny mpihaino ny mpiara-miasa aminao. Tsy azo atao ny manao izany amin'ny dokam-barotra contextual.
Ho fanamarihana farany, ity misy toro-hevitra iray: zava-dehibe ny mitadidy fa tsy misy na iray aza amin'ireo paikady voatanisa no vahaolana farany. Misy fandrika ho an'ny tsirairay amin'izy ireo, koa ataovy izay hahitanao ny fitambaran'ny paikady mifanaraka amin'ny teti-bola sy tanjonao.
Tags: vidiny isaky ny hetsikavidiny iray kilaometatravidiny isaky ny arivocpaCPMmarketing marketingmandoa isaky ny kitihoppchaino aman-jery sosialy